Brie truffle brie - VIP taraafikada
Bogga ugu weynBrie yar oo leh truffle
Waqtiga diyaarinta: 10 daqiiqo
Waqtiga Joogitaanka: 72 saacadood
Waxyaabaha ay ka kooban tahay dadka 4
Bri yar oo 200 g ah
11 garaam oo xamuul ah
Diyaargarowga waa in la sameeyaa 72 saacadood (3 maalmood) kahor.
U kala jar brie laba qaybood dherer ahaan.
U qaybi tartiib-tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah dhinac walba oo ka mid ah qaybta hoose ee briiska.
Ku duub faashad aluminium ah. Ku rid sanduuq hawo leh oo qaboojiyaha 72 saacadood.
Ka bax oo ka tag heerkulka qolka 1 saac ka hor intaadan u adeegin.
Yaanyada mozzarella oo leh qashin